China 100% Cotton Trendy Baby Isi Ezu PY-YR007 rụpụta na Factory | Pinyan
100% Cotton Trendy Baby Isi Ekike PY-YR007
100% owu trendy nwa ahụ uwe
1. Kedụ uru dị na akwa akwa dị ọcha?
Ebe ọ bụ na eriri owu bụ ezigbo onye na-eduzi ọkụ na ọkụ eletrik, ọnụọgụ ọkụ ya na-adịkarị ala, na n'ihi oke porosity ya na oke mgbanwe ya, enwere ike ịchịkọta ikuku dị ukwuu n'etiti eriri ndị ahụ, ikuku dịkwa ezigbo onye na-eduzi ọkụ na ọkụ eletrik. Ya mere, akwa textiles na-acha ọcha na-enwe ezigbo mkpuchi ọkụ, na iyi akwa owu na-eme ka ndị mmadụ nwee okpomọkụ. 2 、 Kedụ ka esi eyi uwe elu?
Gaa: T-uwe elu + okpu okpu okpu sara mbara n'ihi na mkpụrụ ndụ melanin dị na anụ ụmụaka etozughi oke ma nwee nguzogide na-adịghị mma na ụzarị ultraviolet, a na-atụ aro ka ị yiri uwe ogologo ma ọ bụ uwe ogologo aka mgbe ị na-apụ, nke nwere ike ọ bụghị naanị igbochi ntachu, ma na-echebekwa nwa siri akpụkpọ.
Nwere ike ịhapụ nwa ahụ iyi ezigbo ikuku ikuku ikuku, nwee ike igwu ọfụma ọfụma, mana ọ ga - ezere oke ọkụ.
2. Njem njem: ogologo uwe elu + uwe ogologo ọkpa
N'oge ọkọchị, ọ bụrụ na ndị nne na nna chọrọ ịkpọga ụmụ ha n'ọpụpụ, ha ga-anọ ogologo oge n'èzí, ọ dịkwa mfe ịnweta anwụ. Na mgbakwunye, anwụnta, ogwu, nje bacteria na ihe ndị ọzọ ga-eyi anụahụ ha egwu. Yabụ tinye uwe mwụda ogologo maka ụmụaka, ọ bụghị naanị mmetụta dị mma, kamakwa iji zere ọnwụ anwụnta, ogwu ogwu na ọnọdụ ndị ọzọ.
Ngwaahịa eji: maka uwe ndị otu, nhazi onwe onye, ​​wdg, nwere ike ịhazi agba, ụkpụrụ, njirimara.
--Gịnị mere iji họrọ anyị?
1.Various ekwekọghị na fashionable imewe na dị iche iche na agba izute gị chọrọ.
2.High mma na ọrụ kacha mma.
3.A na-anabata obere obere.
5.Offer ọrụ nke na-agbakwunye gị logo.
--Gịnị bụ MOQ?
Maka ngwaahịa dị iche iche, akwa dị iche iche, ọnụọgụ a kapịrị ọnụ ga-abụ ihe dị iche, pl na-enye onye na-ere anyị ihe ị chọrọ, anyị ga-elele MOQ maka gị.
--Olee otu esi amata nnukwu agwa?
Tupu imepụta, anyị ga-ezitere gị ụdị PP, mgbe inyochachara, mgbe ahụ anyị ga-amalite ngwaahịa nnukwu.
--Kedu maka mbukota?
Anyị na ndabara na eyi akpa mbukota ma ọ bụrụ na ị na-achọghị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ a na-atọkwa nkwakọ, pl ka anyị mara, anyị ga-akwado adabara nkwakọ ma ọ bụ ahaziri dị ka gị imewe.
--Kedu ka aga esi ebunye m mbupu m?
Anyị nwere ike ibufee ngwongwo ahụ awara awara, site ikuku, ụgbọ oloko ma ọ bụ site n'oké osimiri. Anyị ga-enye gị ụzọ kachasị mma maka ịbugharị maka ọnụọgụ nke usoro gị.
Osote: Mgbụsị akwụkwọ na oyi bandeeji Winter Baby Body Suit PY-YR005
Short uwe nwa Baby ịrị Suite PY-YR006
Ikpa efe Cotton Baby romper Suit PY-YR008
Mgbụsị akwụkwọ na Winter bandeeji Winter Baby Isi Ezu ...
Jọgọọ Short Short Baby Baby ịrị Suut PY-YR004
Okpomoku na-acha uhie uhie Nwanyị PY-YR001
Owu 0-12 Onwa Baby Jump Suit PY-YR010